पैदल घर हिडेकाहरु इच्छा कामना गाउँपालिका पुगेपछि गाडी चढ्न पाइन्छ भनेर खुसी हुन्थे | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
यो चितवनको एक मात्र गाउँपालिका हो । यहाँ सुविधा सम्पन्न अस्पताल छैन तर पनि नागरिकलाई हामीले कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भनेर आफ्ना तर्फबाट सबै प्रयास गर्‍यौँ ।
लकडाउनको घोषणा गरिसकेपछि पनि राजमार्ग क्षेत्रमा पूर्णरुपमा लकडाउन हुन सकेन किनकि राजमार्गमा अत्यावश्यक सेवाका लागि पनि सवारी साधनहरू चल्ने नै भए । लकडाउन सुरु हुनुभन्दा पहिलादेखि नै हामीले टोल सुधार समितिहरूको भेला गर्‍यौँ । वडाका जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी सबैको भेला गरेर नागरिकको घर दैलोमा गएर चेतनामुलका कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष समेत निकाल्यौँ ।
कोरोना भाइरस भनेको के हो? कसरी सर्छ ? यसको सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि भौतिक दुरी कायम गर्ने, साबुन पानीले हात धोएर खाना खाने, मास्कको प्रयोग गर्ने लगायतका सन्देशहरू हामीले जनतालाई दियौँ । टोल टोलमा साबुन र पानीको व्यवस्था समेत गर्‍यौँ ।
लकडाउनको सुरुवात भइसकेपछि घरबाहिर निस्किन हुँदैन यसले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुन्छ भनेर समुदायलाई सन्देश दिने काम भयो जसले गर्दा जनताले सरकारको योजनालाई सहयोग गरे तर यो असाध्यै चुनौतीपूर्ण काम रह्यो । किनभने नागरिकलाई थुनेर राख्दा उनीहरूको व्यापार व्यवसाय अनि कृषि उपज बेचेर खानेहरूलाई गाह्रो भयो । अब यसलाई कसरी समाधान गर्नपर्छ भनेर हामीले योजना बनायौँ । त्यस्तै काम गर्नका लागि विदेश गएका मजदुरहरूको सूची तयार पार्ने र उनीहरू स्वदेश फर्किदा कसरी सुरक्षित तरिकाले फर्काउने भनेर समेत छलफल गर्‍यौँ ।
हामीले स्वदेशमै काम गर्न गएका मजदुरहरूलाई घर फर्काउने काम गर्‍यौँ । प्रत्येक वडामा कम्तीमा दुई वटा क्वारेनटिन राखेर सुरक्षित तरिकाले घर पठायौँ । मजदुरी गरेर खानेहरू छन् उनीहरूलाई राहतको समेत व्यवस्था भयो । कम्तीमा पनि १० हजारभन्दा बढी घर परिवारलाई पटक पटक राहत दियौँ । विदेशबाट आउनेहरूलाई क्वारेनटिनमा राखेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने लगायतका कामहरू भए ।
गाउँपालिकामा रहेका ९ वटा स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर शंकास्पदहरुको पिसिआर गर्ने काम भयो । स्वास्थ्य सेवामा खटिएकाहरूलाई सय प्रतिशत भत्ताको व्यवस्था गरेका छौँ । ३ सय भन्दा बढिलाई कोरोना परीक्षण गराइएको छ जसमध्ये ३५ जनालाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखियो पनि ।
गाउँपालिकाले क्वारेनटिनको साथै आइसोलेसनको पनि व्यवस्था गर्‍यो । अहिले १० बेडको अस्पताल निर्माण गरिरहेका छौँ । सबै नाकामा स्वास्थ्यकर्मी राखेर स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो ।
विशेष गरेर लकडाउनको बेलामा राजमार्गमा अलपत्र परेका जनतालाई हामीले गन्तव्यमा पुग्नका लागि सहयोग गर्‍यौँ । लकडाउन भएपछि सङ्घीय सरकारले सबैलाई घर पठाउने व्यवस्था मिलाउन सकेन । ठाउँ ठाउँमा मजदुरहरू अलपत्र अवस्थामा हिँडिरहेका थिए । कोही काखमा नानी बोकेका, पेटमा बच्चा भएका दर्दनाक अवस्थामा हिँडेकाहरूलाई उद्धार गरेर गन्तव्यमा पुर्‍याउने काम भयो । उनीहरूलाई हामीले खाली ट्रकमा पठाउने काम गर्‍यौँ । इच्छा कामना गाउँपालिका पुगेपछि हामी गाडीमा चढेर जान पाउँछौँ भन्ने पैदल यात्रुलाई लाग्न थालेको धेरैले सुनाए । उहाँहरूलाई यसो गाह्रो समयमा यसरी सहयोग गर्न पाएकोमा हामी धेरै खुसी थियौँ ।
हामीलाई प्रदेश सरकारबाट १० लाख रुपियाँ आएको हो । त्यो भन्दा अरू सहयोग भएन । अरू खर्च गाउँपालिकाले नै व्यवस्थापन गरेको हो । हामीले अरू खर्चबाट कटाएर त्यो बेलामा खर्च गरेका थियौँ । किनकि जनता रहेमा विकास जहिले पनि गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो त्यति बेला । एउटा जनप्रतिनिधि भएर यसरी सोच्नु हुन्थ्यो हुन्थेन थाहा भएन तर हामीले यही अनुरूप काम गर्‍यौँ । त्यसैले आपतकालिन बजेट छुट्ट्याएर काम गर्‍यौँ । गाउँपालिकामा रहेको स्थापित संस्था, बाहिरबाट आएका एनजिओ आइ एनजिओले पनि हामीलाई सहयोग गरे ।
हामीले जिल्ला प्रशासनसँग पनि मिलेर काम गर्‍यौँ । सिडिओका कारण हामीलाई धेरै ठुलो समस्या भएन । हाम्रो गाउँपालिकामा प्रशासनबाट असहयोग भन्ने खासै भएन । सुरक्षा निकाय र प्रशासनसँग मिलेर बैठकहरू समेत भए । हामी आफैले पनि राजमार्गमा निगरानी गर्‍यौँ र त्यसमा सबैको साथ रह्यो ।
जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने हामी नै भएकाले यस्ता महामारीमा स्थानीय तहको महत्त्व अझै बढी हुने रहेछ । सायद घर गाउँको सरकार महसुस हुने यस्तै बेलालाई चाहिने होला । अहिले सबै वडामा जनप्रतिनिधि छन् । ठाउँ ठाउँमा टोल समितिहरू छन् । सबै क्षेत्रमा जिम्मेवारी बाडफाड गर्‍यो भने सजिलो हुँदो रहेछ भन्ने ठुलो कुरा सिकियो । कोही रातमा आइपुग्यो भने पनि सबैको नम्बर राखेर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षको समेत नम्बर राखेर सहयोगको काम गरियो । हामीले स्कुल स्कुलमा क्वारेनटिन बनाएर समेत बाहिरबाट आएकाहरूलाई राख्यौँ ।
स्थानीय तहलाई दिएको जस्तोसुकै जिम्मेवारी पनि पुरा गर्न सक्छन् भन्ने पनि प्रमाणित भएको छ । अधिकार थोरै मात्र दिएर हुँदैन भन्ने पनि अनुभव भएको छ । जस्तो, पिसिआर टेस्ट गर्ने बेलामा सात दिन आठ दिनसम्म पनि रिपोर्ट नआउँदा उसलाई कोरोना लागेको हो या होइन भनेर थाहा पाउन कठिन भयो । लागेको भएदेखि फेरि कति दिन बस्नुपर्ने भन्ने हुने रहेछ । यस्तो बेलामा स्थानीय तहलाई पिसीआरको अधिकार दिने अनि राम्रा चिकित्सकहरू उपलब्ध गराइदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने हो । तर पनि यस्तै भयो, धेरै महिनासम्म अस्तव्यस्तैमा चल्यो । नागरिकहरू अझै पनि असुरक्षित छन् । कुन बेला कोरोना भाइरस लाग्ने हो कुन बेला कति मानिस मर्ने हो थाहा छैन तर गाउँपालिकामा हामीले ज्वरो आएको छ भन्ने थाहा पाउनासाथ स्वास्थ्यकर्मी, र जनप्रतिनिधि घरमै पठाएर उसको अवस्था के छ, पिसिआर गर्नुपर्ने हो कि होइन भनेर समेत बुझ्ने काम गरेका छौँ ।
कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि जनताले लकडाउनमा राम्रो सहयोग गरे । उनीहरू घरमै बसेर भौतिक दुरी कायम भयो । त्यस्तै मास्क र स्यानिटाइजरको समेत प्रयोगले सुरक्षित रहन सहयोग भयो ।
कोरोना सङ्क्रमणले शिक्षामा असाध्यै ठुलो असर पार्‍यो । शिक्षा र व्यावसायिक क्षेत्रमा असर परेको छ । विद्यालयमा विद्यार्थी पढ्न नपाउँदा घर घरमा थुनिएर बसेका छन् । उनीहरू मानसिक तनावमा छन् कि भन्ने परेको छ । यो गाउँपालिकामा ३५ किमी राजमार्ग भए पनि दुर्गम ठाउँहरू धेरै छन् । रेडियोबाट समेत शिक्षा दिन नसक्ने अवस्था छ । नौलो माध्यम र दूर शिक्षा भनेर छुट्टै खालको अभियान चलायौँ पनि । शिक्षकहरूमा असहज परिस्थिति भएको हो कि भन्ने पनि लाग्थ्यो घरीघरी । कुन विषयको शिक्षक कुन टोलमा जाने भनेर समेत समस्या भएपछि अहिले जोर बिजोर शिक्षा प्रणाली अपनाएका छौँ । कम्तीमा १५ जना विद्यार्थी राखेर पढाएका छौँ । १ कक्षा ३ कक्षा अनि ५ गरेर जोर बिजोर प्रणाली लागु गरेका छौँ ।
गाउँपालिकाले अब आउने दिनमा कसरी सुरक्षित रहने भनेर सचेतना अपनाएको छ । मजदुरी गर्न जाने नागरिकलाई गाउँपालिका भित्रै रहेका योजनामा काम गर्न लगाउने उनीहरूलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न प्रयास गर्ने योजना छ । स्वस्थ र खानपिनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ । त्यही अनुसार प्रशिक्षण दिँदै स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारी खटाएका छौँ । गाउँपालिकाले स्वास्थ्य पाठ्यक्रम तयार पारेको छ । कृषिमा सबै आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर योजना बनाएका छौँ । यस क्षेत्रका पर्यटकीय सम्भावना पनि प्रशस्त रहेको छ । मन्दिर दर्शन, छहराको अवलोकन अनि र्याफ्टिङ लगायतमा सम्भावना छन् । यसमा स्थानीय नागरिकलाई त्यही अनुसारको शिक्षा दिएर अगाडि बढाउने योजना बनाएका छौँ ।
यो कथा इच्छाकामना गाउँपालिका अध्यक्ष गीता गुरुङसंग गरिएको कुराकानीमा आधरित भएर लेखिएको हो ।